Izindaba - Kungani kunzima kakhulu ukupakisha kabusha?
Njengamanje, kuphela i-14% yokupakisha kwepulasitiki emhlabeni wonke okusetshenziswe kabusha-kuphela ama-5% wezinto ezisetshenziswayo futhi ngenxa yenkunkuma ebangelwe inqubo yokuhlunga nokusebenzisa kabusha. Ukuphinda kusetshenziswe kabusha ukupakisha kobuhle ngokuvamile kunzima kakhulu. UWingstrand uyachaza: “Amaphakethe amaningi enziwe ngezinto ezixubekile, ngakho-ke kunzima ukuzisebenzisa kabusha.” Ikhanda lempompo lingesinye sezibonelo ezijwayelekile, imvamisa ezenziwe ngemithombo yepulasitiki ne-aluminium. "Amanye amaphakheji mancane kakhulu ukuthi angakhipha izinto eziwusizo."
U-Arnaud Meysselle, umqondisi omkhulu weREN Clean Skincare, uveze ukuthi izinkampani zonobuhle zinobunzima ekutholeni isisombululo esifanele ngoba izindawo zokuphinda zisetshenziswe kabusha ziyahlukahluka kakhulu emhlabeni. "Ngeshwa, noma ngabe okufakwayo kungaphinde kusetshenziswe ngokuphelele, okungcono kakhulu kunamathuba angama-50% kuphela okuvuselelwa," esho engxoxweni yeZoom nathi eLondon. Ngakho-ke, ukugxila komkhiqizo kusukile ekupakisheni okungaphinde kusetshenziswe kabusha kwafakwa ekupakisheni kabusha kwepulasitiki. "Okungenani ungenzi ipulasitiki eseyintombi nto."
Ngemuva kokusho lokho, i-REN Clean Skincare yaba ngumkhiqizo wokuqala wokunakekelwa kwesikhumba ukusebenzisa ubuchwepheshe be-Infinity Recycling kumkhiqizo wayo wesiginesha i-Evercalm Global Protection Day Cream, okusho ukuthi ukupakisha kungavuselelwa kaninginingi ngokushisa nangokucindezela. "Le plastiki iqukethe izinto ezingama-95% ezenziwe kabusha, futhi ukucaciswa kwayo nezimpawu zayo akufani nezepulasitiki ezincashile," kuchaza uMysselle. "Okusemqoka ukuthi ingabuye isetshenziswe kabusha unomphela." Njengamanje, amapulasitiki amaningi angavuselelwa kabusha kanye noma kabili kuphela.
Vele, ubuchwepheshe obufana ne- "Infinity Recycling" busadinga ukupakishwa ukuze kungene izikhungo ezifanele ukuphinde zisetshenziswe kabusha. Imikhiqizo efana nekaKiehl ithatha isinyathelo ekuqoqeni ukupakisha ngokusebenzisa izinhlelo zokusebenzisa kabusha esitolo. "Ngenxa yokwesekwa ngamakhasimende ethu, sesiphinde savuselela amaphakethe emikhiqizo ayizigidi eziyi-11.2 emhlabeni wonke kusukela ngo-2009. Sizimisele ngokuvuselela amanye amaphakheji ayi-11 million ngonyaka ka-2025," kubhala umqondisi womhlaba wonke wakwaKiehl uLeonardo Chavez nge-imeyili evela eNew York.
Izinguquko ezincane empilweni zingasiza futhi ekuxazululeni inkinga yokuphinda isebenze, njengokusetha udoti osebenzisa kabusha endlini yokugezela. "Ngokuvamile, kunodoti owodwa kuphela endlini yangasese, ngakho-ke wonke umuntu uhlanganisa wonke udoti," kusho uMeyselselle. "Sicabanga ukuthi kubalulekile ukukhuthaza wonke umuntu ukuthi asetshenziswe kabusha endlini yokugezela."
Isitsha Sokugeza Powder Ngesefa, Iziqukathi Zokhilimu Bezimonyo, Ukupakisha kweCream Jars cosmetic, I-cosmetic Cream Jar, I-Black Bottle Gel Polish, Imbiza ye-Eye Cream,